> Resource > Transfer > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Samsung Galaxy S3 in S4
Waxaan leeyahay S3 ah in lay siiyo inay naagtaydii si uu u bedelo phone iyada hadda. Hadda ayaan soo qaaday bixinta cusub S4 iyo jeclaan lahaa in nuqul oo dhan xiriir ka S3 in ay S4 ah. Waa maxay ugu fudud iyo sida ugu dhaqsaha badan si tan loo gaadho ?? Waxaan iska load xiriirada ka S3 inaan PC ka dibna kaliya iyaga nuqul karaa S4 ay ?? Haddii ay sidaas tahay, meel loo hoydana iyadaa Reload file xiriirada ku saabsan S4 waa meesha ??
Waxaa jira wax aan ku xiriirada loading ka S3 in PC ka dibna iyaga nuqul in S4. Qaabka ugu dhakhsaha badan si ay u gudbiyaan xiriirada ka Samsung Galaxy S3 in S4 waa in la isticmaalo telefoonka xirfadle in qalab phone xogta kala iibsiga. Halkan waa u fududahay in la isticmaalo mid, loo magacaabay ah Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Waa qalab kala iibsiga phone hal-click. Just mid click iyo xiriirada ku xasuusta phone S3 iyo xisaab, sida Gmail, in la isla wareejin doonaa S4. Waa wax fudud oo haboon.
Download this phone qalab kala iibsiga xog ku saabsan PC ama Mac. Qaybta hoose ku diiradda saarayaa version Windows. Dadka isticmaala Mac, waxaad qaadi karaan tallaabooyinka ka mid ah.
Fiiro Gaar ah: waxaa gooni Samsung S3 iyo S4, MobileTrans si buuxda u taageersan phone Android badan iyo miisaska. Halkan, waxaad ka heli kartaa info badan oo ku saabsan taageeray telefoonada Android iyo miisaska .
Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka S3 in S4
Hoos waxaa ku qoran tilmaan buuxda oo ku saabsan ka Samsung Galaxy S3 wareejinta xiriirada si S4. Halkaan hoose 'ayaa ka soo wada hubi!
Tallaabada 1. Daahfurka this macluumaadka telefoonka qalab kala iibsiga kombuutarka
Bilowga aad, bilowno macluumaadka telefoonka qalab kala iibsiga - MobileTrans aad kombuutarka dib markii la rakibey. Guji Start iyo aad u hesho suuqa kala iibsiga telefoonka.
Tallaabada 2. Isku Galaxy S3 Samsung oo S4 in kombuutarka
Markaas, labada ah ee Samsung Galaxy S3 iyo S4 xidhmaan PC ah iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB. Tani qalab kala iibsiga phone isla ogaan doonaa laba qalab oo iyaga soo bandhigay in uu furmo suuqa ugu weyn. Your Galaxy S3 muujinaysaa ilaa bidixda, halka S4 ayaa la tusay xaq. Inta u dhaxaysa laba telefoonada waa "Flip". Waxaa Riix waana layna beddeli doonaa meelaha ka mid ah laba telefoonada.
Fiiro gaar ah: By sax off "data Clear hor nuqul", waxaad ku banneyn kartaa xiriirada aad S4 qolka xiriirada ku saabsan S3 sameeyo. Si aad nuqul ka xiriirada badbaadiyey in xisaabaadka si S4, waa inaad marka hore la saxiixato xisaab ku S3, phone isha
Tallaabada 3. xiriirada ka dhaqaaq S3 in S4
Tani qalab kala iibsiga phone siinaysaa fursad uu ugu dhaqaaqi xiriirada, jadwalka, abuse wac, SMS, taariikhda, sawiro, videos iyo barnaamijyadooda aad. Si aad u dhaqaaqo xiriirada, waa in aad uncheck xogta kale.
Ka dib markii in, guji "Start Copy". Markaas, furmo pop-up ah, waxaad eegi kartaa xiriirada habka wareejinta. Markii geeddi-socodka ah uu dhamaado, waa in aad guji "OK".
Hadda, aad u ogaato sida aad nuqulka xiriir ka S3 in S4 in mid ka mid click. Download this phone qalab kala iibsiga xogta u leedahay in isku day ah.